२५ वर्षपछि दाङमा भेटियो ‘तक्षक नाग’ , “जय ” लेखी शेयर गर्नु होस,मनले आटेको पुग्छ – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. २५ वर्षपछि दाङमा भेटियो ‘तक्षक नाग’ , “जय ” लेखी शेयर गर्नु होस,मनले आटेको पुग्छ – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
२५ वर्षपछि दाङमा भेटियो ‘तक्षक नाग’ , “जय ” लेखी शेयर गर्नु होस,मनले आटेको पुग्छ
यसको उत्तर अलि जटिल छ । केही सर्प आकारका डरलाग्दा हुन्छन्, विषालु हुँदैनन् । केहीलाई हेर्दा सामान्य लाग्ने केही सर्प निकै विषालु हुन्छन् । सर्पका थुप्रै प्रजातिमध्ये तक्षक नाग नाम दिइएको सर्प पनि छ । नाम राख्ने पौराणिक कथाबाट प्रभावित भएको हुनुपर्छ । यसको डसाइबाट मान्छे त मर्दैन तर यो सर्प उड्न सक्छ । असोज ११ मा दाङको घोराही–२ सुर्केडाँगीमा तक्षक नाग भेटियो । दाङमा सर्प उद्धार गर्दै आएका वसन्त सुवेदीले खबर पाए । उद्धार गर्न भनी गए तर उनी पुग्दासम्म स्थानीयले त्यसलाई मारिसकेका थिए । वसन्तलाई स्थानीय आशिष सुवेदीले खबर गरेका थिए । पुग्न अलिकति ढिलाइले उनले त्यो सर्प मरिसकेको मात्रै देख्न पाए । अंग्रेजीमा ‘अर्नेट फ्लाइङ स्नेक’ भनिने ‘तक्षक नाग’ नेपालमा सर्वत्र सजिलै देख्न पाइने सर्पमा पर्दैन । सर्पको यो प्रजाति निकै कम देखिएको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको November 1, 2020 November 2, 2020 37 Viewed